शिक्षण — यात्रा ली - आधिकारिक साइट
हामी परमेश्वरलाई हाम्रो उपहार कसरी प्रयोग गर्छन्?
यो र्याले मा अग्रिम कलेज सम्मेलन बाट छोटो सन्देश छ, कांग्रेस. तपाईँले तल पांडुलिपि पढ्न सक्नुहुन्छ:
म येशूको महिमा लागि हाम्रो उपहार प्रयोग बारे धेरै छोटकरीमा तपाईं कुरा गर्न चाहनुहुन्छ.
के तपाईंले कहिल्यै सुन्नुभएको छ बच्चाहरु प्रश्न? तिनीहरूले कुनै अन्त देखिन्छ कि एउटा अचम्मको जिज्ञासा छ. त्यो जादुई प्रश्न “किन” घण्टा र घण्टा मा जान सक्नुहुन्छ. म बच्चाहरु जसले मित्र यो अवस्थामा छन् अहिले. खैर यो त्यहाँ किन सोध्न रुचि कि मेरो प्राण मा एक सानो बच्चाको जस्तो देखिन्छ, तर यो अमूर्त प्रश्नहरूको बारेमा छैन, यो दैनिक कुराहरू बारेमा.
म धेरै सजिलै उत्प्रेरित छैन छु. त्यहाँ स्वाभाविक संचालित छन् जो केही मानिसहरू हुन्, र केहि गरेको गर्न आवश्यक भन्ने तथ्यलाई तिनीहरूलाई लागि पर्याप्त प्रेरणा छ. मेरी पत्नी ती मान्छे मध्ये एक छ; म होइन.
मलाई सम्पन्न केहि प्राप्त गर्न को लागि आदेश मा, म महान् कुरा गरिरहेको छु भन्ने अर्थमा आवश्यक. "तर म यो रद्दी बाहिर ले भने, रद्दीटोकरीमा मानिस प्राप्त सुरक्षित हुनेछ?"म एक ठूलो तस्वीर मान्छे हुँ, र म कहिले काँही विवरण वा अरोचक कार्यहरू गर्न आएको छु. दुर्भाग्यवश, विवरण र अरोचक कार्यहरू वास्तविक जीवन को बहुमत हो. म संघर्ष किन यो शायद छ…
यो भने येशूले गुलाब फर्क गर्छ?
खैर हामी वर्ष को समय वरिपरि छन्. हाम्रो आमा गरेको चर्च दुई पटक एक हामीलाई धेरै जाने, वा नजिकैको चर्च भवन एक राम्रो ईस्टर सुट र टाउको धारण. म y'all केही थाहा पहिले नै आफ्नो ईस्टर सुट र पोशाक बाहिर छानिएको छ.
यो हरेक पर्वहरू भाग लिन्छ हुन्छ देखिन्छ. सामान्यतया येशूले ख्याल नगर्ने पनि मान्छे केही बाटो मा मुछिन गर्दा क्रिसमस र इस्टर वर्ष ती रोचक पटक हो. त्यहाँ ईस्टर अन्डा र जताततै बिक्री को लागि ईस्टर क्यान्डी हो. त्यहाँ ईस्टर कार्यक्रम हो, र parades. इस्टर थोडा हाबी, हुनत धेरै ईस्टर कथा विश्वास गर्दैनन्.
यो अचम्मको हुनत किनभने ईस्टर र क्रिसमस सांस्कृतिक घटनाहरू भएका छन् छ. तिनीहरू साना भन्दा बढी राष्ट्रिय बिदा मा सक्रिय गर्नुभएको, परिवार पुनर्मिलन, र रिटेलरहरूबाट लागि अवसर केही बढी पैसा बनाउन. पक्कै, जन्म र ख्रीष्टको मृत्यु विश्वास गर्नेहरूलाई मनाउन भनेर, तर यो आवश्यक होइन.
म ईस्टर लागि सबै बाहिर जाने मेरो परिवार हुर्किने सम्झना. हामी हप्ता मल जाने चाहन्छु अघि र ईस्टर खरायो संग तस्बिर लिन. म व्यक्तिगत विचारमा सबै छुट्टी mascots को creepiest छ. एक विशाल…
म को हुँ? पीटी. 2: अपनाए
यो भिडियो Batesville मा एक चेला अब सम्मेलन हो, सुश्री. कृपया भिडियो र अडियो गुणस्तर क्षमा
पछिल्लो समय हामी पहिचान बारेमा हाम्रो छलफल केही जगहरू राखे. हामी के पहिचान महत्त्वपूर्ण बनाउँछ बारेमा कुरा; मुख्य रूप कि यदि हामी जो थाहा छैन, हामी बाँच्न मानिन्छ हुनुहुन्छ कसरी थाहा छैन. अनि त्यसपछि हामी सुन्दर बनाएको हुनुहुन्छ बारे कुरा, तर भङ्ग. किनभने हाम्रो brokenness हामी परमेश्वर र एक मुक्तिदाता को आवश्यकता मा विभाजित हुनुहुन्छ.
यो बिहान हामी परमेश्वरको मुक्ति बारेमा सुन्दर सत्य को एक छलफल गर्न जाँदै हुनुहुन्छ, जो ग्रहण छ. यो बिन्दुमा हुनत, पहिचान को चर्चा थोडा फेरबदल. हामी परमेश्वरको गरेको गरिरहनु सबै हामी अन्तिम night- बारेमा कुरा कुराहरू, परमेश्वरको चिनिएको, भाँचिएको, र पृथ्वीमा सबैलाई साँचो खाँचोमा परेका-हो. हामी कुरा गर्न जाँदै हुनुहुन्छ कुराहरू अब ती साँचो हो कि कुराहरू ख्रीष्टमा भएका छन्. हामी मसीहीहरू हुँदा हामी अब हाम्रो पहिचान कसरी परिवर्तन बारे कुरा गर्दै हुनुहुन्छ
हाल म स्टीव रोजगार को एक जीवनी पढ्न, संस्थापक र दूरदर्शी एप्पल पछि, संसारमा सबै भन्दा ठूलो कम्पनी. उहाँले एक प्रतिभा किनभने पढ्न साँच्चै रोचक थियो…
म को हुँ? भाग 1: सुन्दर तर टूटे
यस सप्ताह हामी पहिचान बारेमा कुरा गर्न जाँदै हुनुहुन्छ. त्यो कुरा आफ्नो नेताहरूले मलाई के आग्रह छ, तर के तिनीहरूले थाहा थिएन यो पहिले नै मेरो मन मा भएको कुरा थियो र म सोचिरहेका गरिएको गर्नुभएको. म D.C मेरो चर्च मा युवा समूह संग यसको बारेमा कुरा गर्नुभएको. एकदम बिट.
त्यसैले किन मेरो मन मा पहिचान भएको छ? म यो तपाईं चिन्नुहुन्छ त महत्त्वपूर्ण किन लाग्छ? यदि तपाईं जो थाहा छैन किनभने, के तपाईं बाँच्न मानिन्छ हुनुहुन्छ कसरी थाहा छैन.
बर्न पहिचान बारेमा सोच्नुहोस्. यो मानिस एउटा डुङ्गामा मा wakes र उहाँले छ जो थाहा छैन. उहाँले एक सुराग पाता र स्विट्जरल्याण्ड जान्छ. उहाँले एक लड्न पाउने र त्यो लडाई मा प्रशिक्षित गर्नुपर्छ बुझ्छ. यदि तपाईं अनियमित बाहिर फेला कि पागल हुन तपाईँलाई गोप्य निन्जा कौशल थियो? उहाँले एउटा यात्रा मा छ चलचित्र बाँकी लागि उहाँले छ जो पत्ता लगाउन. उहाँले पनि थाहा थिएन कुराहरू सक्षम छ. तर यदि त्यो छैन थाह छ, उहाँले जीवन बिताउन सक्ने छैनन्…
मसीही मेरो आनन्द अन्त मतलब बन्ने गर्छ? एउटा रोचक प्रश्न हो र म एक निष्पक्ष एक सोध्न लाग्छ. त्यहाँ मसीहीधर्म एक निश्चित चित्र अक्सर चित्रित कि छ. मान्छे मसीहीधर्म विचार गर्दा तिनीहरूले विभिन्न कुराहरू विचार. केही टिभी प्रचारक चिल्ला लाग्छ, अरूलाई ठूलो चर्च टोपी मा एक सूट वा पुरानो कालो हजुरआमा सेता मान्छे लाग्छ. केही सोच्न राजनीतिक conservatives वा विज्ञान चाहनुहुन्छ नगर्ने ती मानिसहरूले. तर धेरै केही मानिसहरू ख्रीष्टियन लाग्छ र लाग्छ: हे, त्यसो गर्न रमाइलो कुरा हुनेछ! मसीही मानिसहरूलाई मजा जस्तो छैन बन्ने.
ख्रीष्टियन एक killjoy रूपमा प्रतिष्ठा मिल्यो. यो नीरस मान्छे र पुरानो मान्छे को लागि केहि. गीत मा एक Rapper भन्छन्, "तपाईं डराएका भने, त्यसपछि चर्च जानुहोस्। "जाहिर मसीही मण्डलीहरू काँतर लागि हो, डराएको punks. मान्छे लाग्छ मसीही बनेर तपाईं सूट र लामो कपडे लगाउने छ मतलब, र खराब मसीही संगीत सुन्न, र सुन्दर बन्द. सबै भन्दा पहिले, y'all केही पहिलो स्थानमा शांत छैन, तर अर्को कथा छ.
म यो ज नियम साक्षात्कार हेर्नुभयो हिजो. उहाँले चर्च आफ्नो अनुभव कुरा थियो. आफ्नो अनुभव चर्चमा सधैं तपाईंले आउन बताएका…
गर्व भाषण र परमेश्वरको महिमा
म बच्चाहरु प्रेम. तिनीहरूले हामीलाई देखाउन किनभने म बच्चाहरु प्रेम कारण छ. तिनीहरूले सानो ऐनाले जस्तै हुनुहुन्छ. मलाई मतलब के तपाईं बताउन गरौं. बच्चाहरु धेरै राम्रो हामी नै समस्या को सबै, तर ती समस्या केवल धेरै स्पष्ट तिनीहरूले अझै लुकाउन कसरी थाहा छैन किनभने. बच्चाहरु तिनीहरूले के मानिन्छ गरिरहनु भएको छैन कामहरू गर्दा यो साँच्चै स्पष्ट छ.
के तपाईं कहिल्यै तिनीहरूले छुन मानिन्छ गरिरहनु भएको छैन एक बच्चा स्पर्श कुरा देखेको छु? तपाईं खोज्दै हुनुहुन्छ भने हेर्न वरिपरि हेर्न छौँ. अर्को बच्चा देख छ भने तिनीहरू मतलब छैन; तिनीहरू केवल वयस्क वा आमाबाबुले हेर्न चाहँदैनन्. तिनीहरूले किन त्यसो गर्छन्, हुनत? तपाईं शुल्क हुनुहुन्छ तिनीहरूले थाहा किनभने, र तिनीहरूले तपाईंलाई तिनीहरूले तपाईंलाई तिनीहरूले जवाफ छ एक हुनुहुन्छ थाहा किनभने पत्ता लगाउन चाहँदैनन्.
वयस्क यस्तै हो. अक्सर हामी के मानिन्छ हुनुहुन्न कुराहरू गरिरहेको संग ठीक हुनुहुन्छ, लामो व्यक्ति हामी पत्ता गर्दैन गर्न जवाफ छ. के तपाईं अगाडी पुलिस हेर्न सम्म गति खुसी छौँ. हामी प्रारम्भिक रूपमा लामो हाम्रो मालिक पत्ता गर्दैन रूपमा काम छोड्न खुसी छौँ शायद. शायद हामीलाई केही रूपमा लामो प्रोफेसर पकड छैन रूपमा परीक्षण मा धोखा…
प्रचार ख्रीष्टको, तिनीहरूबाट महिमा देखाउन
यो भिडियो र पांडुलिपि मा यात्रा गरेको सामान्य सत्र देखि छ पैतृक सम्मेलन 2013.
यो सम्मेलन को विषय Soli deo ग्लोरिया छ, परमेश्वरको महिमा वा एक्लै. त्यो एक महान विषय हो. र हामी दृष्टिकोण चाहनुहुन्छ - ब्रह्माण्डको सबै महिमा एक्लै परमेश्वरको पर्छ कि, हामीले हरेक एक कुरा सूचित गर्न. मेरो समय आज राती समयमा, म चाहन्छु सोच्न भन्ने हाम्रो इंजीलवाद कसरी जानकारी.
येशूले मानिसहरूलाई बताउन हामी सबैलाई थाहा छ कि हामी के गर्न आवश्यक ती कुराहरू हुन देखिन्छ, अहिलेसम्म हामी सबै पर्याप्त छैन गरिरहेको दोषी महसुस. म सही छु? म एक्लै छु? अझै पनि यो गत हप्ता, म मेरो छिमेकी सँग निर्माण गर्न थाले सम्बन्धको प्रकारको गिर सुरु भएको छ किनभने म दोषी महसुस भएको थियो. म सम्बन्ध मा निर्माण बारे जानिजानि रूपमा भएको छैन रूपमा मैले गर्नुपर्छ, र येशूको बारेमा उसलाई भन जारी प्रयास गर्न. र यो म अक्सर यसरी महसुस जस्तै देखिन्छ. म सोध्न चाहेको प्रश्न किन छ? के हृदय दृष्टिकोण तय गर्न आवश्यक छ? म नवीकरण गर्न मेरो मन चाहिन्छ. म किन छु सम्झना छ…
राम्रो जीवन के हो?
यदि सधैं कुरा र राम्रो जीवन पछि chasing कि संगीत को कुनै पनि विधा त्यहाँ, यो हिप-हप छ. म प्रेम हिप-हप. म मेरो सम्पूर्ण जीवनको लागि हिप-हप प्रेम छ. त्यहाँ बस ड्रम बारेमा कुरा, र राइम्स, र ऊर्जा सधैं मलाई आकर्षित कि. म एक किशोरी हुँदा, वा सुतेको वर्ग - - म कक्षा वा सुतेको छैन थियो जब म मेरो मनपर्ने Rappers सुनेर थियो. म आफ्नो हरेक शब्द मा झुन्डियो प्रयोग, र तिनीहरूले भन्न धेरै थियो. मलाई थाहा सबैभन्दा Rappers शिक्षकहरू हुन खोज्नुभएको होइन, तर होइन म सिक्दैछु थिएन. म राम्रो जीवनको बारेमा आफ्नो विचार गर्न नजिकबाट सुने - र म सुने के मनपराएका.
जस्तै "मुद्रा एक कुरा हो म मनपर्ने गीतहरू थियो,रिच प्राप्त गर्नुहोस् वा प्रयास गर्दै मरो। "यो साँच्चै राम्रो जीवनको विचार वालेट भएको थियो भन्ने होइन अचम्मको छ त्यसैले" र म जस्तै शीर्षक एल्बम सुनेर थियो "यति भरी यो पनि नजिक हुन्छ कि. यो पैसा बारेमा सबै थिएन, हुनत. म hedonism बारेमा, आकस्मिक सेक्स, भौतिकवाद, irresponsibility, आलस्य, लागूपदार्थको, सबै छ कि पहेली गर्न टुक्रा रूपमा - र प्राप्त आदर…
हामी आवश्यकता परमेश्वरले छ
तपाईँ केही थाहा, म एक नयाँ बुबा छु. मेरो छोरा, Q, पाँच महिना पुरानो छ. अनि उहाँले लगभग सधैं खुसी छ, हामी निद्रामा आफ्नो नांद मा उसलाई गर्दा बाहेक. उहाँले तुरुन्तै आफ्नो मन भनेन. उहाँले गम्भीर हामी आफूलाई लागि रोक्नु गर्न उहाँको वरिपरि सबै कठिनाइ विरुद्ध उहाँलाई त्यागेर गर्नुभएको सोच्छ, यस्तो थकानको र आफ्नो डायपर आवश्यक्ता परिवर्तन.
तर एक दिन उसले आफ्नो हात मा चूसने आनन्द पत्ता. उहाँले बाहिर समझ छ आत्म-सुखदायक कुरा हो. अनि उहाँले आफ्नो मुख मा आफ्नो हात हाल्छ जब - र उहाँ त्यहाँ यो shoves - उहाँले बारेमा सबै आफ्नो समस्याहरूको बिर्सनुहुन्न. यो वास्तवमा हामी आफ्नो कोठा मा एक्लै उहाँलाई बायाँ भन्ने तथ्यलाई परिवर्तन गर्दैन, तर हात उहाँलाई यो बारेमा भूल बनाउँछ.
खैर, म सबैलाई यहाँ आज एक कोठा मा एक्लै सुतिरहेको भन्दा ठूलो समस्या छ भनेर थाहा. हामी पैसा मुद्दाहरू, विवाह मुद्दाहरू, स्वास्थ्य समस्याहरू, र यति मा. र मेरो छोरा समान, हामी कहिलेकाहीं हाम्रो समस्याहरूको सामना गर्न तरिकाहरू. हामी दुखाइ र दुःखको महसुस गर्न चाहँदैनन्. त्यसैले हामी यसको बारेमा भूल बनाउन कुराहरू बारी. तर सबै भन्दा राम्रो तरिका यो सामना गर्न छ? व्याकुलता?
अनि त्यहाँ धेरै भन्ने केहि undervalued गर्न सुरु. केहि को मूल्य छ यो कति आधारित परिवर्तनहरू. जब छन् 100 सेवा पछि तालिका कुकीहरू तपाईं एक समय को लागि कुरा राखन सक्छ. तर केवल केही कुकीहरू त्यहाँ हुँदा, उनि बहुमूल्य जस्तो. तपाईं शायद वहाँ हतार छौँ र यदि तपाईं समय मा एक प्राप्त, कि…
साथै नयाँ करार, जो आज राती बारेमा हाम्रो पाठ वार्ता, लगभग रिमिक्स जस्तै छ. म परमेश्वरले आफ्ना मानिसहरूलाई एउटा नयाँ करार गर्न प्रतिज्ञा किनभने भन्न, तर यो बारेमा सबै कुरा छैन नयाँ छ. आफ्नो चरित्र परिवर्तन भएको छैन, आफ्ना प्रतिज्ञाहरू परिवर्तन भएन, उहाँको समग्र उद्देश्य परिवर्तन भएन. तर यो करार बारेमा केही कुराहरू छन् कि…
परमेश्वरको सिद्ध रिस
म केही उद्धरण पढेर सुरु गर्न चाहनुहुन्छ. त्यसैले बस राम्ररी सुन्न र तपाईं भने के सहमत वा छैन सोच्न.
"रिस मात्र मूर्ख को Bosom बास।" - अल्बर्ट आइन्स्टाइन
"रिस छोटो पागलपन छ।" - होरेसले
"रिसाएर थालेका छ जे लाज मा समाप्त हुन्छ।" - बेन्जामिन फ्रान्कलिन
"केही कहिल्यै गर्न [क्रोध बाहिर], तपाईं गलत सबै के हुनेछ। " - व्याख्या
रिस हामी सामान्यतया इच्छा छैन एक ती गुण छ. कुनै एक क्रोध रुचि. रिस तीता र पकड grudges जान्छ. रिस खराब निर्णय गर्न जान्छ. रिस कहिलेकाहीं हिंसा गर्न पनि जान्छ. मान्छे सामान्यतया कुनै पनि समय मा ह्यान्डल बन्द उड सक्छ व्यक्तिलाई वरिपरि हुन चाहँदैनन्. यसलाई अलिकति अस्थिर देखिन्छ.
तर यहाँ मेरो प्रश्न छ: परमेश्वरको रिसाउनु गर्छ? त्यहाँ ब्रह्माण्डको उम्लिरहेको पागल परमेश्वर बनाउन सक्छ कि केहि छ? खैर म हाम्रो पाठ यस साँझ प्रश्नको दिनेछ लाग्छ.
तिमी मेरो साथ बारी छैन. प्रस्थान मा 17, इस्राएलका मानिसहरूलाई भने तिनीहरूले उहाँलाई विश्वास गर्न सक्दैन रूपमा अभिनय गरेर परमेश्वरको परीक्षण. सबै पछि उहाँले तिनीहरूलाई लागि पूरा, तिनीहरूलाई आफ्ना मानिसहरूलाई बनाउने, दासत्वबाट तिनीहरूलाई प्रदान, तिनीहरूलाई त्यसैले लागि र प्रदान, तिनीहरूले उहाँलाई अझै पनि विश्वास छैन. त्यसैले तिनीहरू संग लड्न…
एक जीवन शेयर यो
वा कुनै पनि मसीहीहरूलाई - - त्यहाँ नयाँ मसीहीहरूले सुनेपछि जस्तै अप येशूको लागि मेरो हृदयमा स्नेह जगाउन केही कुराहरू छन् बप्तिस्मा मार्फत आफ्नो विश्वासको सार्वजनिक पेशों बनाउन. म मेरो साथी केही विचार, हुनत, जो ब्रान्ड नयाँ मसीहीहरूले पापीलाई के एक सानो भ्रमित थिए र थिए. तिनीहरू नयाँ प्राणीहरू गरिएको they've कि राम्रो समाचार सुन्न, तिनीहरूले नयाँ हृदय छ कि, तिनीहरूले धोए भनेर गरिएका र जायज. र तिनीहरूले यो मतलब तिनीहरू अब सङ्घर्ष वा अनुहार प्रलोभनमा लाग्छ. तर जो कोहि तपाईं साँचो छैन that's बताउन सक्नुहुन्छ एक हप्ताको लागि एक मसीही भएको who's. प्रश्न छैन हामी प्रलोभनको सामना गर्नेछ कि. प्रश्न छ, हामी कसरी प्रलोभनमा प्रतिक्रिया?
म भने यो हप्ता एक उद्धरण पढ्न, "सबै मानिसहरू प्रलोभनमा पर्दा. त्यहाँ छैन तल भङ्ग गर्न सकिन्छ भनेर बस्छ भनेर कुनै मानिसले छ, प्रदान यसलाई सही प्रलोभनमा छ, सही स्थानमा राख्नु। "यो साँचो बयान? त्यहाँ कहिल्यै पनि सबैभन्दा राम्रो राखिएको प्रलोभन प्रतिरोध गर्न सक्ने मानिस भएको छ? खैर, let's लूका बारी 4:1-2:
येशूले, पवित्र आत्माको पूर्ण, यर्दन फर्केको र मा आत्मा नेतृत्व थियो…
त्यहाँ केही कुराहरू राम्रो भएका केही मानिसहरू हुन्. त्यहाँ बास्केटबल खेलाडी वर्ष र वर्ष को लागि लिगमा गर्ने प्ले छन् र तिनीहरूले करियर समाप्त धनी र सुखी. तिनीहरूले प्रेम खेल खेल्न चाहन्थे र तिनीहरूले बनाउन पेसा यसलाई गरिरहेको चाहन्थे. तिनीहरूले गरे र तिनीहरूले राम्रो छौं. त्यसपछि अरूलाई छन्, माइकल जोर्डन जस्तै.
माइकल जोर्डन राम्रो भन्दा बढी थियो. उहाँले ठूलो थियो - धेरै तर्क, सबभन्दा ठूलो. माइकल जोर्डन बस खेल खेल्न र पेसा बनाउन सन्तुष्ट थिएन. माइक सबैलाई भन्दा राम्रो हुन चाहन्थे. उहाँले यो बनाउन सन्तुष्ट थिएन, उहाँले सबै भन्दा राम्रो हुन चाहन्थे. त्यसैले तिनले पछि सबैलाई भन्दा जिम मा बसे र उहाँले सबैलाई भन्दा कठिन काम. र यो सबै उहाँले गहिरो तपाईं पिट्न भनेर इच्छा संचालित थियो किनभने. तपाईं ख्याति बोलीको आफ्नो हल यो देखे. उहाँले अझै पनि मान्छे चुनौतीपूर्ण थियो र आफ्नो प्रतिस्पर्धी प्रकृति कहिल्यै अघि जस्तै बाहिर आए. उहाँले संचालित थियो.
तपाईं पनि Lil वेन जस्तै कलाकार कुरा सकेन. त्यहाँ बस प्रसिद्ध हुन र पैसा बनाउन चाहने केही Rappers छन्. छैन Lil वेन. उहाँले सबैभन्दा ठूलो हुन चाहन्छ…
धेरै दुःखद सत्य
brag अपडेट गर्दछ